Wednesday July 04, 2018 - 16:59:11 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Arooryo Soo-roga (Sabti) ah oo ku beegnayd 2daJuun 2018kaayaanu ka soo baxnay Ceerigaabo, si aanu goobjoog uga noqonno shirka nabadda ee la amba-qaadayo isla markaana aanu fagaare ugala hadalno dadka reer Ceelafweyn. Waxa aannu xarunta martida Ceel-af-weyn kula kulannay Badhasaabka Gobolka Sanaag, Maayarka Degmada Ceel-af-weyn, Saraakiisha ciidanka qaranka iyo cuqaal ka kala socotay labada dhinac ee colaaddu u dhexaysay. Kolkii madarku bilaabmay waxa ay Badhasaabka iyo Cuqaashu iska waraysteen halka ay marayso waanwaanta labada dhinac. Annaguna waxa aanu halkaas kula wadaagnay barasho guud iyo ujeeeddada aanu u soconno.
Wiil qabanqaabada hormood ka ahaa ayaanu nidhi "dhanka kale ma u tallawnaa, si aynu dhallinyarada kale ugu yeedhno?”. Waxa uu yidhi "Idinma raaci karno oo qoryihii ma sidanno”. Waxa aanu nidhi "ma hub ayaad leedahay?”. "Ma nin aan qori lahayn ayaa jira. Laba qori iyo baaskoolad ayaan leeyahay” buu yidhi. Ninka hubkaas lihi waa siddeed iyo toban jir. Isuma gudbaan, waxaana adag in goob lagu kulmiyo. "Haddii xaaskaagu/qoyskaagu yaallo daanta kale, lama oggola in aad habeenkii u gudubto. Waxa lagu farayaa in aad seexato halka beeshaadu taallo” ayaa la yidhi.
"Berri waxa aynu waraysi gaar ah siinaynnaa Saab TV, waxaana nala soo xidhiidhay Keyse Axmed Digaale. Si aynu hawshaas u fulinno, waxa aynu caawa ku negaan doonnaa Burco, marka aynu intaas qabanno ayaynu u ambabixi Hargeysa” ayuu yidhi Abwaan Xasan Saleebaan Dhuxul (Laab-saalax), markaas oo aanu ku sugnayn Nasteexo Hotel ee Bariga Burco. Abwaanku waxa uu xogta gaadhsiinayaa bahdayadii baabuurka kale saarnayd. Tolow hudheelkee la seexanayaa. Abwaan Cabdiraxmaan Abees ayaa nagu wargeliyay "Isla Nasteexo Hotel ayaynu seexannaynnaa caawa. Qof walba waa u diyaar makhsinkii uu jiifsan lahaa”.